Esther Randriamamonjy: «Vonona ny Tahala Rarihasina» - ewa.mg
Esther Randriamamonjy: «Vonona ny Tahala Rarihasina»
News - Esther Randriamamonjy: «Vonona ny Tahala Rarihasina»
Miverina tsikelikely amin’ny
laoniny ny fiainam-pirenena amin’ny ankapobeny. Iray amin’izany ny
fanatanterahana ireo karazan-tsehon-javakanto isan-karazany tahaka
ny rindran-kira, fampirantiana… Iray amin’ireo efitrano malalaka
hanehoan’ny mpanakanto ny talentany ny Ta­hala Rarihasina, etsy
Ana­la­kely. Nampahatsiahy sady na­nentana ireo mpanan-talenta
manerana ny Nosy Rtoa Esther Randriamamonjy, tale jeneralin’ny
Foibe momba ny teny an’ny Akademia Mala­gasy : « mba haneho ny
kantony sy hampita izany amin’ny ankizy sy ny tanora malagasy, raha
tsy izany, ho voafafan’ny zava-mandalo avy any ivelany ny
harentsaina sy ny kolontsaina mbamin’ny soatoavina malagasy».
Nohamafisiny tamin’izany fa «vonona mandrakariva handray ireo
havana mpanakanto manerana ny Nosy ny Tahala Rarihasina, etsy
Tombony ho an’ny tontolon’ny zavakanto (hira, dihy, hosodoko,
fitendrena zavamaneno, tantara sy velakevitra…), ny fisian’ny
Tahala Rari­hasina etsy Analakely, noho izy, miorina anivon’ny
Renivohitra. Mila hajaina ha­trany anefa ireo fepetra amin’ny
L’article Esther Randriamamonjy: «Vonona ny Tahala Rarihasina» a été récupéré chez Newsmada.
Toekarena mikatso : miantso ny fanjakana ny sendikan’ny mpiasa tsy miankina
Sahirana tanteraka, mijaly mihitsy aza ireo miasa tena sy ireo mpiasa any amin’ny sehatra tsy miankina maro. Ha­tramin’izay hamehana ara-pahasalamana izay, tsy misy ny fifampiresahana ataon’ny fanjakana amin’izy ireo, araka ny nambaran’ny mpitarika sendikà. Tsy vitsy amin’ireo mpiasa ny efa very asa, na zara raha mandray karama. “Tsy mihaino ny fitarainan’izy ireo ny fitondram-panjakana”, hoy ny ao amin’ny vondrona sendikaly (SSM). Ny sehatra tsy miankina amin’ny fihariana rehetra no mampidi-bola betsaka amin’ny fanjakana rehefa mandeha ny toekarena. Izao tsy fizahana ny tsy miankina izao, karazany mandrora mitsilany ihany ho an’ny fanjakana. Na io fitaterana tsy mandeha io aza, efa fatiantoka lehibe sy miantraika amin’ny zavatra maro, tsy amin’ny toekarena ihany fa hatrany amin’ny lafiny sosialy, ny foto-piveloman’ny olona maro mihitsy, mivantana na tsy mivantana. Koa mangataka ny hisian’ny fifampiresahana ny sendikà fa izay ihany ny vahaolana : fiaraha-midinika eo amin’ny fanjakana, ny mpampiasa, ary ny solontenan’ny mpiasa. Tombontsoa ho an’ny rehetra ny kendrena amin’izany. Mba hisian’ny fifampitokisana, angatahin’ireo sendikan’ny mpiasa handray azy ireo ny filoham-pirenena miaraka amin’ny minisitera mpiahy. Misy rahateo ny fifanarahana iraisam-pirenena eo amin’ny sendikà sy ny fanjakana nankatoavin’ny firenena malagasy. Fampandraisana andraikitra ny rehetra ireny fa tsy ny fanjakana ihany no atao hahita vahaolana.R.MathieuL’article Toekarena mikatso : miantso ny fanjakana ny sendikan’ny mpiasa tsy miankina a été récupéré chez Newsmada.
Ambatondrazaka: sahirana ireo kandidà
Hatreto aloha, hita ho sahiran-kevitra ireo mirotsa-kofidina hisolo vava ny vahoaka ato amin’ny distrikan’Ambatondrazaka .Tsy izay programa, rehefa lany soa aman-tsara, no takin’ireo mpifidy fa dabilio, vola hameloman-tena… Eo anatrehan’izany, misy ny kandidà mampanangana fikambanana ireo mpitaky. Iny fikambanana iny no omeny zana-kisoa iray, ohatra, hompian-dry zareo. “Ny loza, hoy ny mpilatsaka hofidina iray, ny kandidà niseho voalohany manome tolotra misanda iray alina Ar. Ny tonga manaraka, voatery manindry ambony hatrany.” Mihaino sy manangona ny hetahetam-bahoaka ny ataon’ny kandidà. Fifaninanana moa ity izy ka nisy tokoa ny kandidà nahavita nanofa helikopitera sy nanome omby iray avy ireo fokontany folo ao Ambatondrazaka. Misy nametaka jiro entin’angovo masoandro manazava tanàna maro.Asa, na noho izay zava-misy rehetra izay, fa ny mihaino ireo hetahetam-bahoaka no ataon’ireto ho mpanao lalàna. Ny hikarakara ireo mpampianatra Fram, fampandrosoana fambolena, fitsinjovana zokiolona… ny ambentin-dresak’izy 19 mianadahy. Hoy ny mpanolotsaim-paritany taloha iray: “tokony hilaza ny kandidà raha anisan’ny handany ilay hevitra hanitsy ny lalàmpanorenana izy? Fa ity koa: vao manatsatoka angady eny an-tanety ngazana eny ianao, misy milaza fa tanindrazany io. Mila tolo-dalàna!“ Rarivo L’article Ambatondrazaka: sahirana ireo kandidà a été récupéré chez Newsmada.
Lasa resabe ny amin’ny fanampian’ny mpiara-miombon’antoka avy any ivelany enti-miady amin’ny fihanaky ny valanaretina covid-19. Ady hafa? Na ady anaty… Vola nividianana fitaovana sa fitaovana novidim-bola? Inona ny marina… tokana ihany?Na ahoana na ahoana, tsy maintsy mitady hirika hidirana amelezana izay lazaina ho tsy kely lalana. Amin’izany, na toy inona na toy inona: tsy itokiana koa izay manamarin-tena ho marina sy manana marina… efa ahiahina na ampangaina vao miaro tena?Tsy fifampitokisana no fototra sy fositra fa tsy inona: fifampiahiahiana ho azy lava, fifampiandrasana kendry tohina. Tsy misy resaka tsinona. Hany ka fifanaratsiana hatrany no vokany: tsy marina ny ataon’ny an-daniny, diso izay lazain’ny an-kilany.Mandra-pahoviana? Ny mamorona ny tsy misy aza ataon’ny sasany, vao mainka fa misy zavatra tsy mazava na tsy nohazavaina mialoha. Tsy mety ny fitompoana teny fantatra na marina toy inona aza, vao mainka fa ao anatin’ny fanahian’ny sasany.Mby amin’ny hoe: mandeha eo aloha ny tena, ahiahin’ny olona; mandeha ao aoriana, manahy olona. Tena ilaina ary takina ny fangaraharana hatrany amin’izay miseho sy atao? Na inona na inona izay, mila lazaina na hazavaina; eny, na tsy anontaniana aza.Mila sorohina mialoha ny fifampiahiahiana: tsy hisian’ny fiampangana tsy marina, na ny fanamarinan-tena lasa tsy inoana ho azy. Ny any alatrano, hono, mangarangarana; ny ao an-trano, mitatitra. Mila lazaina ary izay atao, ary atao izay lazaina.Ao anatin’ny ady izao… Fahavalo hoe tsy hita maso avy any ivelany izay manafika ny tena izao no iadiana. Fahavalo iombonana tokony hampiombona ho azy. Nefa izany ady izany indray izao no mampiady an-toerana: ny enti-miady, ny fomba fiady…Raha tsy mampiombona an-toerana ny fahavalo avy any ivelany, manome toerana ho azy ny hafa avy any ivelany; eny, na izay tsy fahavalo aza? Izay ny hoe mila malina na marina aza ny tena amin’izay lazaina sy atao: mitondra inona marina izany izao?Rafaly Nd.L’article Mila malina na marina aza… a été récupéré chez Newsmada.
Mampanahy ny zava-misy iainan’ny zaza malagasy, amin’izao fotoana izao. Nikarakara fihaonana niaraka amin’ny sehatra tsy miankina ny Unicef, ny talata hariva teo, teny Antaninarenina , nanaovana antso handraisan’izy ireo anjara ho an’ny ankizy manokana. Maro amin’ireo zon’ny ankizy no tsy voahaja toy ny fidirana an-dakilasy, ny fahazoana kopia nahaterahana, ny fitsaboana noho ny fahasahiranana. Matetika,tsy misy mijery ny filan’ny ankizy fa manaraka izay fanapahan-kevitry ny olon-dehibe na ny ray aman-dreny mpiahy fotsiny. « Mila hovana ny zava-misy ary voakasika koa ny sehatra tsy miankina ka entanina izy ireo hanamafy ny fiaraha-miasa amin’ny sehatra mpiahy ny ankizy », hoy ny solontenan’ny Unicef eto Madagasikara, i Michel Saint-Lot, nandritra ny lahateniny. Namaly ny antso ny tanora mpandraharaha malagasy vonona hanampy ny ankizy hihoitra amin’ny fiainana. Anisan’izany Razafimahefa Matina, 20 taona mpitantana orinasa vao misandratra, maniry ny hanampy ny tanora malagasy avy amin’ny fianakaviana sahirana hifehy ny teknolojia vaovao ahafahany mahazo asa any aoriana. Betsaka ny mpiandraikitra orinasa nanoina ny antso teny Antaninarenina. Tanjon’ny fanamarihana ny Andro maneran-tany ho an’ny ankizy ny hanangona vola entina manampy ny kilonga hiditra an-tsekoly, hahazo rano madio, hisitraka fitsaboana. Ankoatra ny sehatra tsy miankina, afaka mitondra ny anjara birikiny koa ny daholobe amin’ny fanaovana sonia ny antso ataon’ny Unicef ao anatin’ny tranonkalany ho an’ny mpitondra rehetra ho tombontsoan’ny ankizy. Vonjy A. L’article Andron’ny ankizy: nantsoina ny sehatra tsy miankina a été récupéré chez Newsmada.
Olona telo namoy ny ainy, maty voatsatoka antsy, tao amin’ny fiangonana Basilique Notre-Dame de l’Assomption, any Nice, omaly tokony ho tamin’ny 9 ora maraina. Vehivavy ny roa ary lehilahy mpiambina ilay fiangonana ny fahatelo.Manodidina ny 70 taona any ho any ny iray amin’ireto vehivavy namoy ny ainy. Maty voarasa antsy, tahaka ny nahazo an’i Samuel Paty, ilay mpampianatra, tantara sy jeografia tao amin’ny kolejy Bois d’Aulne, Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), ny 16 oktobra teo. Mbola afaka nitsoaka kosa ilay vehivavy fahatelo, 30 taona eo ho eo, saingy nilofika ary namoy ny ainy, noho ny ratra mafy nahazo azy.Tovolahy, manodidina ny 25 taona, miendrika Afrikanina Tavaratra, mahay miteny frantsay tsara, ilay nahavanon-doza. Nandritra ny namonoany ireo olona telo ireo, tsy nitsahatra niantsoantso “Allah Akbar” izy. Azo an-tsaina amin’izany ny mety ho foto-pinoana arahiny. Voasambotra ihany izy io, saingy naratra mafy noho ny tifitra nataon’ny polisy azy, ary nentina notsaboina tany amin’ny hopitaly.Adiny roa taorian’io tranga io, nisy fikasana hamono olona tamin’ny alalan’ny tsatoka antsy ihany koa tany Avignon, saingy nandamoka. Maty voatifitry ny polisy frantsay mantsy ilay tompon’antoka, raha iny izy teo am-panambanana antsy olona iray iny indrindra.Araka izany, mihorohoro fatratra amin’ny asa fampihorohoroana izay tsapa fa mirongatra dia mirongatra tokoa ny vahoaka frantsay tato ho ato.M.R.L’article Mirongatra ny asa fampihorohoroana any Frantsa: olona telo maty voatsatoka antsy tany Nice a été récupéré chez Newsmada.
Mahery vaika ny valanaretina: niverina nihiboka noho ny Covid-19 ny any Frantsa
Tratry ny tampody fohy. Tsy azo ialana noho ny fahamaroan’ireo tranga vaovao sy ny fiakaran’ny isan’ireo lavon’ny covid-19 ny fanapahan-kevitry ny mpitondra any Frantsa. Tsy maintsy niverina nihiboka indray ny any an-toerana, manomboka anio, araka ny fanambaran’ny filoha frantsay, i Emmanuel Macron, afakomaly alina. “Anisan’ny fomba iray hiadiana sy hisakanana ny fihanaky ny valanaretina izany”, hoy izy.Na izany aza anefa, mbola manohy ny fianarana any an-tsekoly ireo mpianatra. Azo atao koa ny mamangy ireo toerana na foibe itaizana ireo zokiolona. Nilatsaka koa ny didy fa voarara tanteraka ny fivorivoriana ankalamanjana sy ny ivelan’ny fianakaviana.Hihiboka iray volana izany ny any FrantsaTsy maintsy mitondra taratasy fanamarinana “attestation” amin’ny fivoahana na ny fivezivezena ivelan’ny trano fonenana ireo mponina. Mikatona ho an’ny firenena hafa, ankoatra ny ao Eoropa, ny any Frantsa. Ampahany amin’ireo fepetra samihafa noraisin’ny fitondrana frantsay izany, manoloana izao fiverenan’ny Covid-19 any an-toerana izao. Tsy mbola tafiditra ao anatin’izany fepetra izany kosa anefa ireo departemanta ivelan’i Frantsa.Tsiahivina fa hifarana ny 1 desambra, izany hoe haharitra iray volana, izao fihibohana any Frantsa izao.Tsy faly amin’i Frantsa ireo silamoEtsy andaniny, tsy faly amin’i Frantsa ireo firenena silamo noho ny ambaran’izy ireo fa fanimbazimbana ny finoan’izy ireo amin’ny alalan’ny nanaovana sariitatra ny mpaminany Mahomet. Resaka hafa koa izany, ankoatra ny covid-19…Synèse R.L’article Mahery vaika ny valanaretina: niverina nihiboka noho ny Covid-19 ny any Frantsa a été récupéré chez Newsmada.